स्लोवाक प्रतियोगितामा भाग लिनुहोस् र १००० यूरो | क्रिएटिव अनलाइन
जोस एन्जेल | | धेरै
स्लोवाक एक जुत्ता ब्रान्ड हो जुन युवा दर्शकहरूको उद्देश्य हो केहि फरक गर्न प्रयास गर्दै। तिनीहरू आफूलाई ब्रान्डको रूपमा कल गर्न आउँदछन् शहरी त्यो स्नीकरको क्लासिक डिजाइन कायाकल्प गर्दछ। नयाँ शैली प्रदान गर्दै। अब ब्रान्डले एक प्रतियोगिता सुरू गर्दछ जसमा यसले तपाईंलाई भाग लिन आमन्त्रित गर्दछ। स्लोवाक प्रतियोगिताले युवा रचनात्मकलाई तपाइँको ब्रान्डको नजिक नयाँ डिजाइनका साथ ल्याउने प्रयास गर्दछ।
तिनीहरूको वर्णनमा उनीहरू चेतावनी दिन्छन् कि तिनीहरूको ब्रान्डसँग सँधै हरियो स्पर्श हुन्छ। अरू ब्रान्डहरू भन्दा फरकको रूपमा। तपाईको आफ्नै वेबसाइटमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, यो यस्तो तथ्य हो कि यदि तपाई जित्न चाहानुहुन्छ भने बचाउन सकिन्न।
1 यो को लागी हो र यसको उद्देश्य के हो
2 प्रस्तुतीकरण र समयसीमा
3 र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने पुरस्कारमा के समावेश हुन्छ?
4 प्रतियोगिता नियमहरू
यो को लागी हो र यसको उद्देश्य के हो
सिद्धान्तमा त्यहाँ प्रतिस्पर्धी सीमा छैन। जो कोही पनि भाग लिन चाहन्छन्, त्यसकारणले तपाईले स्लोवाक प्रतियोगिताको लागि दर्ता गर्दा उनीहरूले कुनै योग्यताहरूको लागि सोध्ने छैनन्। चाहे तपाईं विद्यार्थी हो, कलाकार वा व्यक्तिगत, तपाईं भाग लिन सक्नुहुन्छ। यो विवादास्पद मेट्रो म्याड्रिड प्रतियोगिताको साथ संघर्ष हो जुन हामीले अर्को दिन क्रिएटिभोस अनलाइनमा लेख्यौं। यो एक निजी कम्पनी को विपरीत हो, त्यसैले यो यति छलफल योग्य छैन।
स्लोवाक प्रतियोगिताको उद्देश्य भनेको यो हो कि टेम्प्लेट स्वतन्त्र रूपमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले यो प्रदान गर्छन् र तपाईं यसलाई सम्पादन गर्नुहुन्छ। जुत्ता मोडललाई स्लोवाक हड्डीहरू भनिन्छ, जुन यो ब्रान्डको प्रयोगकर्ताहरूसँग परिचित हुनेछ। उनीहरूले विचार गर्ने सब भन्दा रचनात्मक इनपुटको मूल्य हुनेछ। ती मध्ये तीन प्रकारका छन्:
(२) हड्डी महिला
()) युनिसेक्स हड्डी
केवल सीमित स्लोवाकले प्रति व्यक्ति केवल पाँच डिजाइनहरू गर्दछ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। र व्यक्तिको समूह भएको खण्डमा समूहको तर्फबाट केवल एक जनाले आफ्नो नाम लेख्न सक्दछन्। त्यसोभए मानिस सम्मिलित हुन र योग्यताको बीच पुरस्कार विभाजन हुनेछ।
प्रस्तुतीकरण र समयसीमा
स्केचहरू एनालग उपकरणहरू (मार्करहरू, पेन्सिलहरू, इत्यादि) को साथ डिजिटल डिजिटलहरू (फोटोशप, इलस्ट्रेटर) को साथ बनाउन सकिन्छ। डाउनलोड गर्न योग्य टेम्पलेटमा आधारित विचार प्रतिबिम्बित गर्दै। समय सीमा यस वर्षको मार्च २ 28 देखि मे २ 28, २०१ 2018 सम्म हुनेछ। त्यसो भए आउनुहोस्!
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने पुरस्कारमा के समावेश हुन्छ?
स्लोवाक प्रतियोगिताको विजेतालाई एक हजार यूरोको पुरस्कार प्रदान गरियो (€ 1.000) र आहार र आवासको लागत सहित एल्चेको एक राउन्ड ट्रिप। यो कारखाना र यसको प्रक्रियाहरू हेर्नका लागि तिनीहरू कसरी विजेताका जुत्ताहरू लिने छन्। विजेतासँग यो पुरस्कार हुनेछ, तर यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू एक मात्र हुन्।
त्यहाँ 8 अधिक व्यक्ति को लागी एक रमाईलो डिजाइन पनि छ, तर एक विजेता होईन। यी आर्थिक रकम बिना हुनेछ, तर कम्तिमा एक मान्यता। (यो पुनःसुरुका लागि कहिले पनि दुखाउँदैन)।
थप रूपमा, ती उल्लेखितहरूका डिजाईनहरू विशेष डिजाइनहरूको रूपमा बिक्रीमा राखिनेछ। यसैले, डिजाइनहरूको अधिकार प्रत्येक विजेता प्रतिबिम्बित हुन्छ। र यस मामला मा तपाईं को लागी एक आकार छ ताकि तपाईं सडक मा प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ। जबकि बाँकी उल्लेख कम्पनी को लागी एक अनिवार्य निर्माण को आवश्यकता छैन। यो अधिकार घटनामा सुरक्षित छ जुन जुत्ता स्वाद वा सौन्दर्यको लागि होइन कम्पनीले खोजेको हो।
प्रतियोगिताका सबै प्रकारका प्रतियोगिताहरूका नियमहरू पढ्न यो महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि तिनीहरू कहिलेकाँही बिन्दुहरूको संख्याका कारण पढ्न गाह्रो हुन सक्छ, यदि हामीले कुनै तथ्यलाई दावी गर्न आवश्यक भएमा तिनीहरूलाई दिमागमा राख्नु रोचक छ। यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू छन् जुन तपाईंले पढ्नुहोस्:
निर्णायकको निर्णय अन्तिम हुनेछ: निर्णायकको निर्णय अन्तिम हुनेछ र हामी केहि दावी गर्न सक्षम छैनौं।
तेस्रो पक्षहरूद्वारा गरिएको कुनै पनि दावी सहभागीहरूको जिम्मेवारी हुनेछ।: सावधान हुनुहोस् यदि तपाईंले अरू ब्रान्डहरूमा कुनै सन्दर्भ थप्नुभयो भने, तिनीहरूले तपाईंलाई रिपोर्ट गर्न सक्दछन् र यो सिर्जनाकर्ताको उत्तरदायित्व हुनेछ।
हस्ताक्षर गरेर तपाइँ आधारहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ: यी आधारहरू बारे जान्नु तपाईंको जिम्मेवारी हो, किनकि तपाईंको जानकारी भर्दै र प्रतियोगिता पठाउँदै, तपाईं तिनीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ
आधारहरु को परिमार्जन: कम्पनीले आधारहरु परिमार्जन गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ यदि स्लोवाक प्रतियोगिताले आवश्यक छ
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » स्लोवाक प्रतियोगितामा भाग लिनुहोस् र १००० यूरो जित्नुहोस्
पाब्लो द्वारा पनि निर्दिष्ट। «यो विवादास्पद मेट्रो म्याड्रिड प्रतियोगिताको साथ टकराउँदछ जुन हामीले अर्को दिन क्रिएटिभस अनलाइनमा लेख्यौं» यदि हामी त्यो लेख पढ्छौं भने हामी त्यस बारे फेरि कुरा गर्छौं। त्यसोभए यो होइन कि हामी समर्थन गर्दछौं, तर क्रिएटिभोसबाट हामी जान्दछौं कि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन पेशेवर लेखमा डिजाइन गर्न समर्पित छन् जसले हाम्रो लेखहरू पढ्दछन्। त्यसैले यो महत्वपूर्ण छ कि समुदाय पनि यी प्रतिस्पर्धा बारे सचेत छ। र तिनीहरूलाई तपाईंको सुविधा अनुसार प्रयोग गर्नुहोस्। यो विज्ञापन सामग्री होईन, किनकि कसैले हामीलाई यसको लागि भुक्तान गर्दैन। यो केवल जानकारी हो। कहिलेकाँही यो ट्यूटोरियलको रूपमा हुनेछ र कहिलेकाँही यो डिजाइनको बारेमा अधिक हालको सामग्री हुनेछ। यस मामला मा यो छ। हामी आफैंमा स्थिति छैन। विज्ञापन पृष्ठ मा खुट्टा मा प्रायोजकहरु जो वेबमा ब्यानर समावेश गर्न चाहान्छन्। बधाई पाब्लो!
ह Hongक Kong र टोकियो को सडक को तस्वीरहरु मा यो जीवन्त नियन बत्तीहरु